The Triangle Development Web | Martech Zone
Ndị nkwekọrịta anyị niile na ndị ahịa anyị na-aga n'ihu kwa ọnwa. O siri ezigbo ike na anyị na-achụso ọrụ a kara aka na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na anyị anaghị ekwe nkwa usoro iheomume. Nke ahụ nwere ike iyi ụfọdụ egwu mana okwu a bụ na ebumnuche ekwesịghị ịbụ ụbọchị ntọhapụ, ọ kwesịrị ịbụ nsonaazụ azụmaahịa. Ọrụ anyị bụ ị nweta nsonaazụ azụmaahịa ndị ahịa anyị, ọ bụghị ịme ụzọ mkpirisi iji wepụta ụbọchị mmalite. Dika Healthcare.gov na-amu ihe, nke ahu bu uzo nke n’eduba n’uche.
Iji nwaa ma debe ndị ahịa ọrụ na oge, anyị kewapụrụ chọrọ n'ime ga- (nzute nsonaazụ azụmaahịa) ma dị mma ịnwe (nkwalite nhọrọ). Anyị na-adịghị mgbe ịtọọ oge na-ẹkụre n'oge nke ntọhapụ ebe anyị maara na a ga-enwe mgbe ụfọdụ mgbanwe mkpa.
Robert Patrick bụ CEO nke Lablọ nyocha PhD, ụlọ ọrụ nke na-emepụta, na-ewuli ma na-ebupụta weebụsaịtị maka ọtụtụ ụlọ ọrụ kachasị elu nke Fortune 500. Robert na-etinye nsogbu na Healthcare.gov agbabala ma nyela 5 isi ihe kpatara mbubata ọdịda.
Mgbe, mgbe emerụ ndị Oge, Ọnụahịa & Njirimara Debe iwu. Chee maka nke a dị ka triangle, ị ga-ahọrọ otu isi ofu na abụọ ndị ọzọ agbanwe. N'ime uwa a, enwere ike ịmepụta ihe ọ bụla ma ọ bụrụhaala na enwere oge na ego. Otú ọ dị, onye ọ bụla na-ewu ngwa weebụ kwesịrị ịhọrọ, n'ihu, nke kachasị mkpa. Nke a setịpụrụ ụda ma lekwasị anya maka otu esi arụ ọrụ. Ọmụmaatụ,
Ekwesịrị ịmalite ya naanị otu oge emechara atụmatụ (ego na oge na-agbanwe agbanwe).
Ekwesịrị ịmalite ya ngwa ngwa (ego na atụmatụ na-agbanwe agbanwe).
Okwesiri ibupute ya na itinye ego n’uche (oge na njirimara n’ agbanwe agbanwe).
Launching na imecha n'uche kama ịmalite usoro. Ngwa weebụ kwesịrị ịhụ dị ka ọrụ ga- mmalite Ọzọkwa evolve. Iwulite ihe dị mkpa na ihe achọrọ maka taa site na uto na evolushọn n'uche ka mma karịa iwulite ihe n'ebumnuche nke ịmecha na mmalite.
Ọtụtụ ndị na-ere ahịa tinyere. Agwara ya na webusaiti Obamacare ruru ndi n’ere ahia iri ise na ise. Gbakwunye ọtụtụ ndị na-ere ihe ọ bụla nwere ike ịbụ mkpọda na-amị amị. O yikarịrị ka ị ga-ekwe nkwa na a ga - enwe nsogbu na mbipute faịlụ, esemokwu faịlụ nka, echiche echiche nka, ịhapụ ọrụ, na ndepụta ahụ na-aga n'ihu. Cheedị ma ọ bụrụ na anyị nwere ndị nnọchiteanya 55 nke ọ bụla ga-edozi otu akụkụ nke nsogbu ahụ dum.
Nkọwapụta Ozi ejighị ya kpọrọ ihe. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ buru ibu ga-ajụ ndị na-ere ahịa ka ha nyefee RFP ma kwusi kpamkpam na usoro ihe owuwu ihe ọmụma na-awụlikwa elu na mmepe na-enweghị nghọta ma ọ bụ kwenye na oke. Nke a bụ nnukwu, jọrọ njọ, igbu oge, ịfu ego, mmeghe. Ọ bara ezigbo uru ịkọwapụta ngwa ngwa dịka ị nwere ike ibute ma dị njikere ịdị gara gara ma na-agbanwe agbanwe n'ihe ndị enweghị ike ịkọwapụta tupu ịmalite mmemme ya (nke a dị ka iwu ụlọ na-enweghị ụkpụrụ). Ndị na-ere ahịa ga-emefu ego ma bido ibelata ụzọ ha ma ọ bụrụ na emeghị nke a nke ọma.
Oge ezughi Quality nkwa. O doro anya na nke a bụ nnukwu ọdịda na mmalite nke HealthCare.Gov. Ha na-arụ ọrụ na ụbọchị mbupute siri ike (oge bụ agbanwe agbanwe agbanwe nke triangle na nke a) yana atụmatụ na mmefu ego kwesịrị ka e mezigharị iji hụ ụbọchị mbupute ya na oge maka Qualitydị Mma Kwesịrị Ekwesị e wuru n'ime atụmatụ ahụ. Nke a bụ mmejọ dị oke mkpa ma eleghị anya na-efu ọtụtụ mmadụ ọrụ ha.
Tags: -eriokpuatụmatụimechanlekọta ahụike.govụlọ ọrụ ọmụmantụkwasị obi ịdị mmammalite akaraogetrianglemgbere
Nkwupụta Soda nke 2013 - Mpịakọta 2
Ndị ahịa B2B Na-achọta Ọganiihu Na Ahịa Ọdịnaya